Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, hal-abuurnimo muhiim ah ayaa ka dhacay berrinka quruxda cagaaran. Kaliya maahan inaan helno fursado badan oo loogu talagalay daryeelka maqaarka oo nadiif ah oo aan sun ahayn, daryeelka timaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, laakiin waxaan sidoo kale aragnaa noocyada inay diiradooda u weecinayaan sameynta alaabooyin waara oo dhab ah iyo xirmo ...
Warbixintii ugu dambeysay ee cilmi baarista ee ay soo saartay MarketsandResearch.biz waxay saadaalisay suuqyada caalamiga ah ee mica ee soo saaraha, gobolka, nooca iyo arjiga sannadka 2020. Waa cilmi-baaristii ugu dambeysay illaa 2026 waxayna siisaa awood dhammaan macluumaadka jira ee suuqa iyo fursadaha suuqa adduunka. Jihada de ...
Mica waa magaca guud ee macdanta silica leh, oo leh astaamaha kuleylka, daahfurnaanta, iska caabbinta kuleylka, iska caabinta daxalka, kala-goynta fudud iyo fiiqista oo ay ka buuxdo dabacsanaan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa waxyaabaha la isku qurxiyo, balaastigyada, cinjirka, dahaadhka, daxalka ...
Mica budada isku dhafan LCP waa qalab muhiim ah oo ku yaal 5G
Polymer crystal polymer (LCP) oo leh mica iskudhaf ah oo wax laga badalay waa shey muhiim u ah isgaarsiinta 5G. kuleylka kuleylka iyo u adkeysiga dabka ayaa beddeli doona maaddada E-sigaarka ee loo yaqaan 'PEEK'. In ChinaPlas 2019, Polyplastic waxay muujisay maadada sigaarka elektaroonigga ah - LCP. LAPER-kan ...
Shirkadda Hua Jing oo ah nooca wax soosaarka mica ee wax soo saarka si guul leh kor loogu qaaday
Bishii Janaayo 19keedii, farsamayaqaannada Huajing ayaa ka takhalusi lahaa qalabka.HuaJing mica oo ku yaal Xujiatuan, Ciyu Town, Lingshou County, oo ah shirkad tiknoolajiyad sare ku dhisan oo ku saleysan geeddi-socodka budada mica-dufan badan .Shirkaddu waxay maal-gelin doontaa 16 milyan si ay u keento Jarmalka. mikirifoonka horumarsan ...